စာဖတ်သူဟာ..လက်ရှိ ဝင်ငွေနဲ့ မရပ်တန့်ဘဲ ဆက်လက်တိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင် အသိလေး တခုပေးပါရစေ...
စာဖတ်သူဟာ..လက်ရှိ ဝင်ငွေနဲ့ မရပ်တန့်ဘဲ ဆက်လက်တိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင် အသိလေး တခုပေးပါရစေ..
လူတွေရဲ့ ဝင်ငွေဟာ သူတို့ ရဲ့ အရည်အချင်းကောင်းနဲ့ တိုက်ရိုက် အချိုးကျပါတယ်။
အရည်အချင်းကောင်း နည်းသူဟာ ဝင်ငွေနည်းပါတယ် ။ အရည်အချင်းကောင်း များသူဟာ ဝင်ငွေများပါတယ်…
ကိုယ်က ဝင်ငွေများချင်တယ်ဆိုရင် အရည်အချင်းကောင်းတွေမြှင့်ရပါမယ်…
ဒီလို မြှင့်လိုက်တိုင်းမှာ ဝင်ငွေတွေ လိုက်ပြီးတိုးပါတယ်…
အိုခေ… ဒီ အသိလေးကို နားလည် လက်ခံလာပြီဆိုရင်..
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဝင်ငွေတခုကို အရင် ရည်မှန်းပါ..ဘယ်လောက်လိုချင်လဲ…
၁ဝ သိန်းလား၊ သိန်း ၂၀ လား၊ သိန်း ၄၀ လား…
သိန်း ၅၀ လား၊ သိန်း ၁၀၀ လား…
ဒါကို ရည်မှန်းပြီးရင် ဒီ ဝင်ငွေတွေရနိုင်တဲ့ အလုပ်ကို စဉ်းစားပါ၊ ဒီအတွက် လိုအပ်တဲ့ အရည်အချင်းကောင်းတွေ ဆက်ဖြည့်ပါ။
ဒီမှာ အရေးပါလာမှာ တခုက အချိန်ပါ…
အကယ်၍ များ ကိုယ်ဟာ ဝင်ငွေ တိုးဖို့ ကြိုးစားနေပြီဆိုရင် ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်တိုင်းဟာ ဒီဝင်ငွေ တိုးဖို့အတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ အလုပ်တွေ ရွေးလုပ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒီအလုပ်တွေ လုပ်လာပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တန်ဖိုးလည်း တက်လာပါတယ်။
ဥပမာ –ဆိုပါစို့… ကျွန်တော်တို့ တနေ့ကို ၁၀ နာရီနဲ့ ၁လကို ရက် ၂၀ လောက် အလုပ်လုပ်တယ်။
ဒီတော့… ရက် ၂၀ နဲ့ ၁၀ နာရီ မြှောက်လိုက်ရင် ရက် ၂၀ x ၁၀ နာရီ = နာရီ ၂၀၀ ရမယ်… (တလကို နာရီ ၂၀၀ အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့)
တလကို ၅ သိန်း ရတယ်ဆိုရင် တစ်နာရီ ဘယ်လောက်တန်လဲတွက်ဖုို့. ၅ သိန်းကို နာရီ ၂၀၀ နဲ့ပြန် စားကြည့်ရအောင် လခ ၅ သိန်း / နာရီ ၂၀၀ = ၂၅၀၀ ကျပ် ရမယ်…(တစ်နာရီဟာ ၂၅၀၀ ကျပ်တန်တယ်ပေါ့)
ကိုယ်က ဝင်ငွေ ၁၀ သိန်း ရချင်တာဆိုရင် အခုန တွက်ခဲ့သလို …
ဝင်ငွေ ၅ သိန်းမှာ တစ်နာရီ ၂၅၀၀ တန်ရင်..
ဝင်ငွေ ၁၀ သိန်းမှာ တစ်နာရီကို ၅၀၀၀ တန်ပါတယ်…
သိန်း ၂၀ ဆိုရင် တစ်နာရီကို ၁ သောင်းတန်ပါတယ်…
သိန်း ၂၀၀ ဆိုရင်တော့ တစ်နာရီကို ၁ သိန်းတန်သွားပါတယ်…
ကဲ… နာရီတွေဟာ တန်ဖိုးတက်လာပြီလား…
“ကိုသူရရေ.. ဒီလောက် ရပါ့မလား” လို့ တွေးနေရင်ဟုတ်ကဲ့.. ရနိုင်ပါတယ်..
လူတွေ ဖေ့ဘွတ် တခါသုံးရင် မသိလိုက်၊ မသိဖာသာနဲ့၁၅ မိနစ်လောက် ကုန်သွားတတ်ပါတယ်..
တနေ့ကို အနည်းဆုံး ၄ခေါက်ပဲ ကြည့်ဦး (ဒီ့ထက်များပါတယ်) ၁နာရီ ကုန်သွားပါပြီ။
အကယ်၍ များ ကိုယ်က ဝင်ငွေ သိန်း ၂၀ မှန်းထားရင်… ၁နာရီ ၁သောင်း ပလုံခနဲ ဖြစ်သွားပါတယ်…
ဒီအသိဝင်လာတဲ့အတွက်…ကျွန်တော်ဟာ ဝင်ငွေ ဒီလောက်နဲ့ မရပ်တန့်ချင်ပါဘူး…
ကျွန်တော် ဒီ့ထက် ရချင်ပါတယ်… ရနိုင်တယ်လို့လည်း ယုံတယ်…
ဒီအတွက် နည်းလမ်းတွေရှာတယ်…ပညာတွေ ထပ်ပြီး စုဆောင်းတယ်၊လက်တွေ့ ကျင့်သုံးတယ်…
တကယ် တိုးတက်လာပါတယ်…ခက်တာ တခုက…တိုးတက်လာတာနဲ့ အညီ အလုပ်တွေ အများကြီးပိလာတယ်…
အလုပ်တွေ မပြီးဖြစ်လာပါတယ်…ဟိုဟာလုပ်ရမလို… ဒီဟာပဲလုပ်ရမလို…ဟိုအလုပ်လည်း မပြီး… ဒီအလုပ်လည်း မပြီးဖြစ်ပါတယ် မိတ်ဆွေလည်း ကြုံဖူးမယ်ထင်ပါတယ်..
ဒီတော့ ဘာလုပ်ရမလဲ.. ဆက်ပြီး လေ့လာတယ်။ဒီတော့ စာအုပ်တွေဖတ်ကြည့်ပါတယ်..အလုပ်ပြီးဖို့ အချိန်ကို စီမံရမယ်တဲ့.. Time Management ပေါ့ဗျာ…
လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကို နေ့စဉ် ToDo list အနေနဲ့ ချရေးပါတဲ့..ဒါနဲ့ ချရေးကြည့်ပါတယ်.. လိုက်လုပ်ပါတယ်…
ပထမပိုင်းတော့ ဟုတ်မလိုလိုပဲ..List ထဲက အလုပ်တွေ ပြီးပေမယ့် တကယ့်တိုးတက်မှု ကို မမြင်ရဘူး…
တကယ် ပြီးရမယ့် အလုပ်တွေ ပြီးမလာဘူး…မပြီးသေးတဲ့ ..အလုပ်တွေကြည့်ပြီး စိတ်ဖိစီးလာတယ်..
အချိန်ဇယားတွေဆွဲဆိုလို့လည်း ဆွဲကြည့်တယ်…ဒါလည်း ၁ပတ်၊ ၂ပတ်ပဲ..ပြီးရင် ပြန်မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်ပြီး … မလုပ်ဖြစ်ပြန်ဘူး
ဒီမှာ တွေ့လာတာက နည်းလမ်းသိယုံတင်မရသေးဘူး။ အသုံးပြုပုံလည်း သိရမယ် ဆိုတာပါ..
အလုပ်တွေ ပြီးယုံတင် မရသေးဘူး၊ အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေကို ပြီးဖို့ ရွေးချယ်တတ်ရမယ်ဆိုတာပါ..
အလုပ်တွေ မြန်မြန်နဲ့ များများပြီးဖို့ လိုပါတယ်။အဲ့ဒီ ပြီးရမယ့် အလုပ်တွေမှာလည်း အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေပါနေဖို့လိုပါတယ်…
ဒါမှ.. ပြီးသလောက် အကျိုးရှိလာမှာပါ..ဒါမှ… အချိန်တွေ တန်ဖိုးတက်လာမှာပါ…
ဆက်လက်လေ့လာတဲ့အခါမှာ…ဒီလို ပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့အတွက် ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေကို ပြီးမြောက်အောင်အချိန်ကို အသုံးပြုစီမံခန့်ခွဲပုံကို သိဖို့လိုပါတယ်။
အချိန်ဟာ စိတ်ခံစားမှုနဲ့ဆိုင်ပါတယ်..ကိုယ်ကြိုက်တာ လုပ်နေရင်… အချိန်ကုန်မှန်းမသိကုန်ပြီး မကြိုက်တာ လုပ်ရရင်တော့… အချိန်ကြာတယ်လို့ ခံစားရမှာပါ..ဒီလို ခံစားမှုဟာ ဦးနှောက်က ထုတ်ပေးပါတယ်..
ဒီတော့..အချိန်ထက် အလုပ်ကို ရွေးတတ်ဖို့ လိုပါတယ်..ဘယ်အလုပ်ကို ဘယ်အချိန်မှာ လုပ်ရမယ်ဆိုတာလည်း သိဖို့လုိုပါတယ်..
မနက်မှာ ဘယ်အလုပ်ဟာ အသင့်တော်ဆုံး..နေ့လည်မှာ ဘယ်အလုပ်ဟာ အသင့်တော်ဆုံး…ညနေမှာ ဘယ်အလုပ်ဟာ အသင့်တော်ဆုံး…ဆိုတာတွေ သိလာရင်.. ဖေ့ဘွတ်လည်း ဖြတ်စရာမလိုသလို…အလုပ်တွေ မပြီးလို့ စိတ်ဖိစီးတာတွေလည်း မဖြစ်လာတော့ပါဘူး…
ဒီနည်းလမ်းတွေကို ဆက်လက်လေ့လာပြီး.. ကျင့်သုံးခဲ့တာလက်ရှိအထိ နေရာတခု ရောက်လာပါပြီ။
ဘယ်အလုပ်ကို ဘယ်အချိန်မှာလုပ်ပြီးဘယ်လိုပြီးရမယ်ဆိုတာပါ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
အလုပ်ပုံကို တွေ့လို့ စိတ်ညစ်နေမယ့်အစား…ဆက်တိုက် အစဉ်အတိုင်း ဘယ်အလုပ်ကို ဘယ်အချိန်မှာလုပ်မယ်ဆိုတာ တန်းပေါ်နေပါပြီ။
ဘာနဲ့တောင် သွားတူလည်းဆိုရင်…ရန်ကုန်မြို့ကြီးပေါ်ကို ကျွန်တော် အူလည်လည်နဲ့တက်ခဲ့တုန်းကဘယ်ကားက ဘယ်ကို ရောက်တာ မသိတဲ့အတွက်…
ခဏခဏ မှားစီးခဲ့ပေမယ့်..အချိန်ကြာလာတော့… ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်ကားစီးရမယ်ဆိုတာကိုသိလာပြီး…. သာသာယာယာ အိမ်ပြန်နေရသလိုပါပဲ..
အလုပ်လည်းပြီး… အချိန်လည်းပိုရ….စိတ်လည်းအေး… ဝင်ငွေလည်းတိုးပေါ့ဗျာ..
ကိုယ်ရော…ဒီလိုမျိုး အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေကို စိတ်ဖိစီးမှု မများပဲနဲ့စိတ်လက်ကြည်ကြည်နဲ့… ဘယ်အချိန်မှာ ဘာလုပ်ရမယ်…
ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းသာ သိသွားရင်…ဘယ်လောက်များ အဆင်ပြေမလဲ…
ပြောလက်စနဲ့.. ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပြောပြပါ့မယ်..
ကျွန်တော်တို့ Neuroscience ဆိုတဲ့ ဦးနှောက်အကြောင်းလေ့လာတဲ့အခါမှာ… ဦးနှောက်ဟာ Focus (အာရုံစိုက်မှု)အပေါ်မူတည်ပြီး အလုပ်လုပ်ပါတယ်.
ဥပမာ။ ။ကိုယ်က အလုပ်တခု လုပ်ချိန်မှာ၊ အခြားတခုကို သွားစဉ်းစားနေရင် Focus ပြောင်းသွားပြီး..လက်ရှိအလုပ်လည်းမပြီး..နောက်အလုပ်လည်း မစဖြစ်…ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒီလို.. မစဖြစ်တော့ ရှေ့ရေးကို …ပိုစိုးရိမ်ပြီး.. ပိုတွေး..ပိုတွေးတော့ လက်ရှိအလုပ်က ပိုမပြီး… ဒီလိုနဲ့လုံးလည် ချာလည် လိုက်နေတတ်ပါတယ်…(ဖြစ်ဘူးလား မသိဘူး)
ဒီလိုနဲ့ နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်လာရင်…တလကြာလည်း .. ဘာမှ ဖြစ်မလာ..နှစ်လကြာလည်း .. ဘာမှ ဖြစ်မလာ…တစ်နှစ်ကြာတော့လည်း… ဘာကြီးမှ မဖြစ် ဖြစ်လာပါတယ်..
အရေးကြီးတာက… ကျွန်တော်တို့ အလုပ်အပေါ် စိတ်ချနေဖို့ပါ..တနည်းအားဖြင့်.. ဘယ်အလုပ်ကို ဘယ်အချိန်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုစီစဉ်ထားနိုင်ရင်… စိတ်အေးလက်အေး Focus ကောင်းကောင်းနဲ့လက်ရှိ အလုပ်ကို ပြီးအောင် လုပ်နိုင်ပါမယ်…
အချိန် အပိုင်းလိုက် Focus နဲ့သွားတဲ့အတွက်..တခုပြီး တခု.. သူရောက်လာတဲ့ အချိန်တွေမှာ ..လုပ်သွားရင်းနဲ့ အလုပ်တွေ တခုခြင်း ရှင်းနိုင်လာပါမယ်..
တရက် အလုပ်တွေ အပြီးဖြတ်…တလ အလုပ်တွေ ဖြတ်…နှစ်လကြာတာ့ အလုပ်တွေ အရှိန်အဟုန်နဲ့ပြီး..
တစ်နှစ်ကြာတော့ အရေးကြီးအလုပ်တွေ ပိုမိုပြီးမြောက်လာတဲ့အတွက်အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့တစ်လပြီး တစ်လ၊ တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ်…ဘဝတိုးတက်မှု ကောင်းလာပါမယ်..
အလုပ်ကောင်းတွေ ရွေးချယ်ပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အကျိုးကြောင့်… ဝင်ငွေကောင်းလည်း တိုးလာပါမယ်…
ဒီလို Focus ပြောင်းလဲဖို့အတွက် အလုပ်လုပ်ချိန်မှာမိမိကို အနှောင့်အယှက် မပေးနိုင်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖန်တီးပေးနိုင်ရပါမယ်..
အကောင်းဆုံးကတော့.. အလုပ်လုပ်ချိန်မှာ ဖုန်းကိုSilence (သို့) Flight Mode ပြောင်းထားတာပါပဲ…
ဒီ့အပြင်… အချိန်ဇယားဆွဲမယ်ဆိုရင်..ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်တွေကြီးပဲ မထည့်ဘဲ..ဦးနှောက်ရဲ့ အချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး .. အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်ထားရပါမယ်။
(အများအားဖြင့် ဦးနှောက်ဟာ မနက်ပိုင်းမှာအင်ပြည့်အားပြည့်နဲ့ Focus လုပ်နိုင်ပါတယ်။)
ဒီလို သိထားမှ.. ဘယ်အချိန်မှာ Focus များတဲ့ အလုပ်လုပ်မယ်၊ဘယ်အချိန်မှာတော့ Focus နည်းတဲ့ အလုပ်လုပ်မယ်၊ဘယ်အချိန်မှာတော့ စိတ် အပမ်းပြေအောင် နေမယ်။
ဘယ်အချိန်မှာတော့ လူတွေနဲ့ စကားပြောမယ်။…. စသဖြင့် စီစဉ်ထားနိုင်ရင်..
ဦးနှောက် အတွက် အလုပ်အစီအစဉ် ကျနတဲ့အတွက် ဦးနှောက်ကြီးလည်း မပင်ပန်းတော့ပါဘူး.
ဦးနှောက်က သူမပင်ပန်းဘူးထင်လာရင်..အလုပ်ကို ပင်ပန်းတယ်လို့မမြင်ဘူး။ ပျော်စရာ… အလေ့အကျင့်တခု၊ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် တခုလိုမြင်လာပါမယ်။
ဒါဆိုရင် အချိန်ဇယားကို ပိုပြီးလုပ်ချင်လာမယ်။ ကျွန်တော်တို့ အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေကို ပိုပြီးမြောက်လာမယ်..
ဒီအတိုိင်းရှေ့ဆက်သွားရင်…ငယ်ငယ်က လောက်စာလုံး လိမ့်သလို၊အရှေ့က တခုကိုထိလို့၊ နောက်က တခုတွေပါဆက်တိုက်အဆင့်အဆင့်ထိပြီး လဲသွားသလို…
အလုပ် တခုပြီးသွားတာနဲ့… နောက်အလုပ်တွေပါ ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲ့…ပြီးလာပါမယ်..
နေ့ရက်တိုင်းမှာ အလုပ်ဝန်မပိ…ပိုမို လွတ်လပ်ပေါ့ပါးလာပြီး…အလုပ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကလျော့ချနိုင်ပါမယ်…
ကိုယ့်အတွက် အပမ်းဖြေအချိန်ရော..မိသားစု အချိန်တွေပါ ပေးနိုင်လာပါမယ်..
မိသားစု နဲ့ ထမင်းဝိုင်းမှာ အလုပ်အကြောင်းတွေးမနေပဲ…ကျေးဇူးရှင် အဖေ၊ အမေ၊..ချစ်ခင်ပွန်း၊ ချစ်ဇနီး၊ …သားလေး၊ သမီးလေးတို့အတွက်…မိသားစု ပိုစည်းလုံးသွားစေမယ့် နှလုံးသား စကားတွေ ပြောဖြစ်လာပါမယ်..
သင်ကြား ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ Modern Applied ways of using Time Efficiently (MATE) အဆင့်မြင့် အချိန်ကို ကောင်းကောင်းအသုံးချနည်း သင်တန်းရဲ့နည်းလမ်းပေါင်းများစွာထဲက…အခြေခံ အချက်လေးကို ဒီ စာဖတ်နေသူအတွက်အကျိုးရှိအောင် ဆွဲထုတ်ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်..
စာဖတျသူဟာ..လကျရှိ ဝငျငှနေဲ့ မရပျတနျ့ဘဲ ဆကျလကျတိုးတကျခငျြတယျဆိုရငျ အသိလေး တခုပေးပါရစေ..
လူတှရေဲ့ ဝငျငှဟော သူတို့ ရဲ့ အရညျအခငျြးကောငျးနဲ့ တိုကျရိုကျ အခြိုးကပြါတယျ။
အရညျအခငျြးကောငျး နညျးသူဟာ ဝငျငှနေညျးပါတယျ ။ အရညျအခငျြးကောငျး မြားသူဟာ ဝငျငှမြေားပါတယျ…
ကိုယျက ဝငျငှမြေားခငျြတယျဆိုရငျ အရညျအခငျြးကောငျးတှမွှေငျ့ရပါမယျ…
ဒီလို မွှငျ့လိုကျတိုငျးမှာ ဝငျငှတှေေ လိုကျပွီးတိုးပါတယျ…
အိုခေ… ဒီ အသိလေးကို နားလညျ လကျခံလာပွီဆိုရငျ..
ကိုယျလိုခငျြတဲ့ ဝငျငှတေခုကို အရငျ ရညျမှနျးပါ..ဘယျလောကျလိုခငျြလဲ…
၁ဝ သိနျးလား၊ သိနျး ၂၀ လား၊ သိနျး ၄၀ လား…
သိနျး ၅၀ လား၊ သိနျး ၁၀၀ လား…
ဒါကို ရညျမှနျးပွီးရငျ ဒီ ဝငျငှတှေရေနိုငျတဲ့ အလုပျကို စဉျးစားပါ၊ ဒီအတှကျ လိုအပျတဲ့ အရညျအခငျြးကောငျးတှေ ဆကျဖွညျ့ပါ။
ဒီမှာ အရေးပါလာမှာ တခုက အခြိနျပါ…
အကယျ၍ မြား ကိုယျဟာ ဝငျငှေ တိုးဖို့ ကွိုးစားနပွေီဆိုရငျ ကိုယျလုပျတဲ့ အလုပျတိုငျးဟာ ဒီဝငျငှေ တိုးဖို့အတှကျ ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျတဲ့ အလုပျတှေ ရှေးလုပျဖွဈဖို့လိုပါတယျ။
ဒီအလုပျတှေ လုပျလာပွီဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့အခြိနျတနျဖိုးလညျး တကျလာပါတယျ။
ဥပမာ –ဆိုပါစို့… ကြှနျတျောတို့ တနကေို့ ၁၀ နာရီနဲ့ ၁လကို ရကျ ၂၀ လောကျ အလုပျလုပျတယျ။
ဒီတော့… ရကျ ၂၀ နဲ့ ၁၀ နာရီ မွှောကျလိုကျရငျ ရကျ ၂၀ x ၁၀ နာရီ = နာရီ ၂၀၀ ရမယျ… (တလကို နာရီ ၂၀၀ အလုပျလုပျတယျပေါ့)
တလကို ၅ သိနျး ရတယျဆိုရငျ တဈနာရီ ဘယျလောကျတနျလဲတှကျဖုို့. ၅ သိနျးကို နာရီ ၂၀၀ နဲ့ပွနျ စားကွညျ့ရအောငျ လခ ၅ သိနျး / နာရီ ၂၀၀ = ၂၅၀၀ ကပျြ ရမယျ…(တဈနာရီဟာ ၂၅၀၀ ကပျြတနျတယျပေါ့)
ကိုယျက ဝငျငှေ ၁၀ သိနျး ရခငျြတာဆိုရငျ အခုန တှကျခဲ့သလို …
ဝငျငှေ ၅ သိနျးမှာ တဈနာရီ ၂၅၀၀ တနျရငျ..
ဝငျငှေ ၁၀ သိနျးမှာ တဈနာရီကို ၅၀၀၀ တနျပါတယျ…
သိနျး ၂၀ ဆိုရငျ တဈနာရီကို ၁ သောငျးတနျပါတယျ…
သိနျး ၂၀၀ ဆိုရငျတော့ တဈနာရီကို ၁ သိနျးတနျသှားပါတယျ…
ကဲ… နာရီတှဟော တနျဖိုးတကျလာပွီလား…
“ကိုသူရရေ.. ဒီလောကျ ရပါ့မလား” လို့ တှေးနရေငျဟုတျကဲ့.. ရနိုငျပါတယျ..
လူတှေ ဖဘှေ့တျ တခါသုံးရငျ မသိလိုကျ၊ မသိဖာသာနဲ့၁၅ မိနဈလောကျ ကုနျသှားတတျပါတယျ..
တနကေို့ အနညျးဆုံး ၄ခေါကျပဲ ကွညျ့ဦး (ဒီ့ထကျမြားပါတယျ) ၁နာရီ ကုနျသှားပါပွီ။
အကယျ၍ မြား ကိုယျက ဝငျငှေ သိနျး ၂၀ မှနျးထားရငျ… ၁နာရီ ၁သောငျး ပလုံခနဲ ဖွဈသှားပါတယျ…
ဒီအသိဝငျလာတဲ့အတှကျ…ကြှနျတျောဟာ ဝငျငှေ ဒီလောကျနဲ့ မရပျတနျ့ခငျြပါဘူး…
ကြှနျတျော ဒီ့ထကျ ရခငျြပါတယျ… ရနိုငျတယျလို့လညျး ယုံတယျ…
ဒီအတှကျ နညျးလမျးတှရှောတယျ…ပညာတှေ ထပျပွီး စုဆောငျးတယျ၊လကျတှေ့ ကငျြ့သုံးတယျ…
တကယျ တိုးတကျလာပါတယျ…ခကျတာ တခုက…တိုးတကျလာတာနဲ့ အညီ အလုပျတှေ အမြားကွီးပိလာတယျ…
အလုပျတှေ မပွီးဖွဈလာပါတယျ…ဟိုဟာလုပျရမလို… ဒီဟာပဲလုပျရမလို…ဟိုအလုပျလညျး မပွီး… ဒီအလုပျလညျး မပွီးဖွဈပါတယျ မိတျဆှလေညျး ကွုံဖူးမယျထငျပါတယျ..
ဒီတော့ ဘာလုပျရမလဲ.. ဆကျပွီး လလေ့ာတယျ။ဒီတော့ စာအုပျတှဖေတျကွညျ့ပါတယျ..အလုပျပွီးဖို့ အခြိနျကို စီမံရမယျတဲ့.. Time Management ပေါ့ဗြာ…
လုပျရမယျ့ အလုပျတှကေို နစေ့ဉျ ToDo list အနနေဲ့ ခရြေးပါတဲ့..ဒါနဲ့ ခရြေးကွညျ့ပါတယျ.. လိုကျလုပျပါတယျ…
ပထမပိုငျးတော့ ဟုတျမလိုလိုပဲ..List ထဲက အလုပျတှေ ပွီးပမေယျ့ တကယျ့တိုးတကျမှု ကို မမွငျရဘူး…
တကယျ ပွီးရမယျ့ အလုပျတှေ ပွီးမလာဘူး…မပွီးသေးတဲ့ ..အလုပျတှကွေညျ့ပွီး စိတျဖိစီးလာတယျ..
အခြိနျဇယားတှဆှေဲဆိုလို့လညျး ဆှဲကွညျ့တယျ…ဒါလညျး ၁ပတျ၊ ၂ပတျပဲ..ပွီးရငျ ပွနျမပြေ့ောကျပြောကျဖွဈပွီး … မလုပျဖွဈပွနျဘူး
ဒီမှာ တှလေ့ာတာက နညျးလမျးသိယုံတငျမရသေးဘူး။ အသုံးပွုပုံလညျး သိရမယျ ဆိုတာပါ..
အလုပျတှေ ပွီးယုံတငျ မရသေးဘူး၊ အရေးကွီးတဲ့ အလုပျတှကေို ပွီးဖို့ ရှေးခယျြတတျရမယျဆိုတာပါ..
အလုပျတှေ မွနျမွနျနဲ့ မြားမြားပွီးဖို့ လိုပါတယျ။အဲ့ဒီ ပွီးရမယျ့ အလုပျတှမှောလညျး အရေးကွီးတဲ့ အလုပျတှပေါနဖေို့လိုပါတယျ…
ဒါမှ.. ပွီးသလောကျ အကြိုးရှိလာမှာပါ..ဒါမှ… အခြိနျတှေ တနျဖိုးတကျလာမှာပါ…
ဆကျလကျလလေ့ာတဲ့အခါမှာ…ဒီလို ပွောငျးလဲတိုးတကျဖို့အတှကျ ဦးနှောကျအလုပျလုပျပုံနဲ့အရေးကွီးတဲ့ အလုပျတှကေို ပွီးမွောကျအောငျအခြိနျကို အသုံးပွုစီမံခနျ့ခှဲပုံကို သိဖို့လိုပါတယျ။
အခြိနျဟာ စိတျခံစားမှုနဲ့ဆိုငျပါတယျ..ကိုယျကွိုကျတာ လုပျနရေငျ… အခြိနျကုနျမှနျးမသိကုနျပွီး မကွိုကျတာ လုပျရရငျတော့… အခြိနျကွာတယျလို့ ခံစားရမှာပါ..ဒီလို ခံစားမှုဟာ ဦးနှောကျက ထုတျပေးပါတယျ..
ဒီတော့..အခြိနျထကျ အလုပျကို ရှေးတတျဖို့ လိုပါတယျ..ဘယျအလုပျကို ဘယျအခြိနျမှာ လုပျရမယျဆိုတာလညျး သိဖို့လုိုပါတယျ..
မနကျမှာ ဘယျအလုပျဟာ အသငျ့တျောဆုံး..နလေ့ညျမှာ ဘယျအလုပျဟာ အသငျ့တျောဆုံး…ညနမှော ဘယျအလုပျဟာ အသငျ့တျောဆုံး…ဆိုတာတှေ သိလာရငျ.. ဖဘှေ့တျလညျး ဖွတျစရာမလိုသလို…အလုပျတှေ မပွီးလို့ စိတျဖိစီးတာတှလေညျး မဖွဈလာတော့ပါဘူး…
ဒီနညျးလမျးတှကေို ဆကျလကျလလေ့ာပွီး.. ကငျြ့သုံးခဲ့တာလကျရှိအထိ နရောတခု ရောကျလာပါပွီ။
ဘယျအလုပျကို ဘယျအခြိနျမှာလုပျပွီးဘယျလိုပွီးရမယျဆိုတာပါ အဆငျသငျ့ဖွဈနပေါပွီ။
အလုပျပုံကို တှလေို့ စိတျညဈနမေယျ့အစား…ဆကျတိုကျ အစဉျအတိုငျး ဘယျအလုပျကို ဘယျအခြိနျမှာလုပျမယျဆိုတာ တနျးပျေါနပေါပွီ။
ဘာနဲ့တောငျ သှားတူလညျးဆိုရငျ…ရနျကုနျမွို့ကွီးပျေါကို ကြှနျတျော အူလညျလညျနဲ့တကျခဲ့တုနျးကဘယျကားက ဘယျကို ရောကျတာ မသိတဲ့အတှကျ…
ခဏခဏ မှားစီးခဲ့ပမေယျ့..အခြိနျကွာလာတော့… ဘယျအခြိနျမှာ ဘယျကားစီးရမယျဆိုတာကိုသိလာပွီး…. သာသာယာယာ အိမျပွနျနရေသလိုပါပဲ..
အလုပျလညျးပွီး… အခြိနျလညျးပိုရ….စိတျလညျးအေး… ဝငျငှလေညျးတိုးပေါ့ဗြာ..
ကိုယျရော…ဒီလိုမြိုး အရေးကွီးတဲ့ အလုပျတှကေို စိတျဖိစီးမှု မမြားပဲနဲ့စိတျလကျကွညျကွညျနဲ့… ဘယျအခြိနျမှာ ဘာလုပျရမယျ…
ဘယျလို လုပျရမယျဆိုတဲ့ နညျးလမျးသာ သိသှားရငျ…ဘယျလောကျမြား အဆငျပွမေလဲ…
ပွောလကျစနဲ့.. ဘယျလိုလုပျရမယျဆိုတာ ပွောပွပါ့မယျ..
ကြှနျတျောတို့ Neuroscience ဆိုတဲ့ ဦးနှောကျအကွောငျးလလေ့ာတဲ့အခါမှာ… ဦးနှောကျဟာ Focus (အာရုံစိုကျမှု)အပျေါမူတညျပွီး အလုပျလုပျပါတယျ.
ဥပမာ။ ။ကိုယျက အလုပျတခု လုပျခြိနျမှာ၊ အခွားတခုကို သှားစဉျးစားနရေငျ Focus ပွောငျးသှားပွီး..လကျရှိအလုပျလညျးမပွီး..နောကျအလုပျလညျး မစဖွဈ…ဖွဈတတျပါတယျ။
ဒီလို.. မစဖွဈတော့ ရှရေ့ေးကို …ပိုစိုးရိမျပွီး.. ပိုတှေး..ပိုတှေးတော့ လကျရှိအလုပျက ပိုမပွီး… ဒီလိုနဲ့လုံးလညျ ခြာလညျ လိုကျနတေတျပါတယျ…(ဖွဈဘူးလား မသိဘူး)
ဒီလိုနဲ့ နစေ့ဉျရကျဆကျဖွဈလာရငျ…တလကွာလညျး .. ဘာမှ ဖွဈမလာ..နှဈလကွာလညျး .. ဘာမှ ဖွဈမလာ…တဈနှဈကွာတော့လညျး… ဘာကွီးမှ မဖွဈ ဖွဈလာပါတယျ..
အရေးကွီးတာက… ကြှနျတျောတို့ အလုပျအပျေါ စိတျခနြဖေို့ပါ..တနညျးအားဖွငျ့.. ဘယျအလုပျကို ဘယျအခြိနျလုပျမယျဆိုတာကိုစီစဉျထားနိုငျရငျ… စိတျအေးလကျအေး Focus ကောငျးကောငျးနဲ့လကျရှိ အလုပျကို ပွီးအောငျ လုပျနိုငျပါမယျ…
အခြိနျ အပိုငျးလိုကျ Focus နဲ့သှားတဲ့အတှကျ..တခုပွီး တခု.. သူရောကျလာတဲ့ အခြိနျတှမှော ..လုပျသှားရငျးနဲ့ အလုပျတှေ တခုခွငျး ရှငျးနိုငျလာပါမယျ..
တရကျ အလုပျတှေ အပွီးဖွတျ…တလ အလုပျတှေ ဖွတျ…နှဈလကွာတာ့ အလုပျတှေ အရှိနျအဟုနျနဲ့ပွီး..
တဈနှဈကွာတော့ အရေးကွီးအလုပျတှေ ပိုမိုပွီးမွောကျလာတဲ့အတှကျအရှိနျအဟုနျကောငျးကောငျးနဲ့တဈလပွီး တဈလ၊ တဈနှဈပွီး တဈနှဈ…ဘဝတိုးတကျမှု ကောငျးလာပါမယျ..
အလုပျကောငျးတှေ ရှေးခယျြပွီးမွောကျအောငျလုပျနိုငျတဲ့အကြိုးကွောငျ့… ဝငျငှကေောငျးလညျး တိုးလာပါမယျ…
ဒီလို Focus ပွောငျးလဲဖို့အတှကျ အလုပျလုပျခြိနျမှာမိမိကို အနှောငျ့အယှကျ မပေးနိုငျတဲ့ ပတျဝနျးကငျြကောငျးဖနျတီးပေးနိုငျရပါမယျ..
အကောငျးဆုံးကတော့.. အလုပျလုပျခြိနျမှာ ဖုနျးကိုSilence (သို့) Flight Mode ပွောငျးထားတာပါပဲ…
ဒီ့အပွငျ… အခြိနျဇယားဆှဲမယျဆိုရငျ..ကိုယျလုပျခငျြတဲ့ အလုပျတှကွေီးပဲ မထညျ့ဘဲ..ဦးနှောကျရဲ့ အခြိနျပျေါမူတညျပွီး .. အလုပျလုပျပုံကိုနားလညျထားရပါမယျ။
(အမြားအားဖွငျ့ ဦးနှောကျဟာ မနကျပိုငျးမှာအငျပွညျ့အားပွညျ့နဲ့ Focus လုပျနိုငျပါတယျ။)
ဒီလို သိထားမှ.. ဘယျအခြိနျမှာ Focus မြားတဲ့ အလုပျလုပျမယျ၊ဘယျအခြိနျမှာတော့ Focus နညျးတဲ့ အလုပျလုပျမယျ၊ဘယျအခြိနျမှာတော့ စိတျ အပမျးပွအေောငျ နမေယျ။
ဘယျအခြိနျမှာတော့ လူတှနေဲ့ စကားပွောမယျ။…. စသဖွငျ့ စီစဉျထားနိုငျရငျ..
ဦးနှောကျ အတှကျ အလုပျအစီအစဉျ ကနြတဲ့အတှကျ ဦးနှောကျကွီးလညျး မပငျပနျးတော့ပါဘူး.
ဦးနှောကျက သူမပငျပနျးဘူးထငျလာရငျ..အလုပျကို ပငျပနျးတယျလို့မမွငျဘူး။ ပြျောစရာ… အလအေ့ကငျြ့တခု၊ လုပျရိုးလုပျစဉျ တခုလိုမွငျလာပါမယျ။
ဒါဆိုရငျ အခြိနျဇယားကို ပိုပွီးလုပျခငျြလာမယျ။ ကြှနျတျောတို့ အရေးကွီးတဲ့ အလုပျတှကေို ပိုပွီးမွောကျလာမယျ..
ဒီအတိုငျးရှဆေ့ကျသှားရငျ…ငယျငယျက လောကျစာလုံး လိမျ့သလို၊အရှကေ့ တခုကိုထိလို့၊ နောကျက တခုတှပေါဆကျတိုကျအဆငျ့အဆငျ့ထိပွီး လဲသှားသလို…
အလုပျ တခုပွီးသှားတာနဲ့… နောကျအလုပျတှပေါ ဆငျ့ကဲ ဆငျ့ကဲ့…ပွီးလာပါမယျ..
နရေ့ကျတိုငျးမှာ အလုပျဝနျမပိ…ပိုမို လှတျလပျပေါ့ပါးလာပွီး…အလုပျဖိစီးမှုဒဏျကလြော့ခနြိုငျပါမယျ…
ကိုယျ့အတှကျ အပမျးဖွအေခြိနျရော..မိသားစု အခြိနျတှပေါ ပေးနိုငျလာပါမယျ..
မိသားစု နဲ့ ထမငျးဝိုငျးမှာ အလုပျအကွောငျးတှေးမနပေဲ…ကြေးဇူးရှငျ အဖေ၊ အမေ၊..ခဈြခငျပှနျး၊ ခဈြဇနီး၊ …သားလေး၊ သမီးလေးတို့အတှကျ…မိသားစု ပိုစညျးလုံးသှားစမေယျ့ နှလုံးသား စကားတှေ ပွောဖွဈလာပါမယျ..
သငျကွား ကငျြ့သုံးခဲ့တဲ့ Modern Applied ways of using Time Efficiently (MATE) အဆငျ့မွငျ့ အခြိနျကို ကောငျးကောငျးအသုံးခနြညျး သငျတနျးရဲ့နညျးလမျးပေါငျးမြားစှာထဲက…အခွခေံ အခကျြလေးကို ဒီ စာဖတျနသေူအတှကျအကြိုးရှိအောငျ ဆှဲထုတျရေးသားပေးလိုကျပါတယျ..